FXShooter EA Famerenana - Best Forex EA's | Mpanolotsaina manam-pahaizana | Robots FX
HomeFXShooter EAFXShooter EA Review
BEST Forex EA'S | Expert mpanolo-tsaina | FX ANY JAPON FXShooter EA 1
Price: $ 299 (Package BASIC miaraka amin'ny 2 REAL na DEMO ACCOUNTS, UPDATES GRATISY ARY TOKONY)
Vola tsiroaroa: EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD ary USDCHF
Fotoana natokana: M15
Fanamarihana: Misy fonosana 2 samy hafa ao amin'ny FXShooter Expert Advisor amin'izao fotoana izao:
- ASA: 2 REAL na DEMO kaonty - Vaovao farany sy fanohanana ny sakaiza - Vidiny ara-dalàna: $ 299
- ADVANCED: 4 REAL na DEMO kaonty - Vaovao maimaim-poana sy fanohanana - Vidiny tsy tapaka: $ 450
Tafiditra ao anatin'ireo fonosana ireo ny rakitra SET ho an'ireo mpivady vola natokana!
FXShooter EA Famerenana - Mpanolotsaina ho an'ny Forex mahasoa amin'ny scalping
FXShooter EA dia tena mahasoa sy tanteraka tanteraka FX Expert Mpanolotsaina tombony azo antoka maharitra. Ny mpamorona izany Forex Robot Niasa mafy nandritra ny taona maro izy ireo, mba hahafahany mamorona algorithm trading.
Ity Expert Advisor ity amin'izao fotoana izao no iray ny tsara indrindra ho an'ny varotra varotra varotra varotra ao amin'ny tsena ary natao mba hanome ny fiverenana avo. Na izany aza, amin'ny fiverenana avo dia miteraka lozam-pifamoivoizana ary manome tolo-kevitra isika na hanaisotra ny tombom-barotra amin'ny alàlan'ny fototra ara-drariny na handroso ny tombony ho an'ny kaonty hafa.
FXShooter EA dia mirakitra tambajotra vaovao sy fianarana lalina, mihazakazaka eo amin'ny sehatra varotra Metatrader 4 (MT4) fametrahana, fitantanana ary famaranana ny varotra. Ireo mpandraharaha dia nampiasa sehatra maromaro sy fampiroboroboana marobe mba hananganana ny FX Shooter EA ary koa ny fitsapana ny rindrambaiko talohan'ny fanombohana ny tsena, ho an'ny vokatra faran'izay betsaka.
Ny FX Robot dia manana tombam-bidy tena avo be EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD ary USDCHF pairs amin'ny fampiasana ny ora faharetan'ny 15.
Zavatra tsy manam-paharoa FXShooter EA dia nitombo ny ekipa manam-pahaizana momba ny mpivarotra izay te-hahita anao hahomby!
FXShooter EA - Tsy Fantatra Amin'ny Varotra Forex?
Ampiasao ny FXShooter EA sy hiverina ny fampiasam-bola ho volamena!
FXShooter EA - Tsy nahare momba ny varotra FX mpivarotra taloha ve?
Easy-bola tsy misy ezaka no FXShooter EA dia rehetra momba ny. Izany dia automated Forex tetika sy baikoina poto-rafitra izay mamela anao hipetraka indray, miala voly sy mijery fotsiny ny FX Trading Robot hanao ny fika. Taorian'ny masontsivana, mizana sy ny faritry ny ny varotra no omen'ny anareo, ny Robot ary maka ny anatanterahany ny varotra rehetra ho anareo. Izany mamela anao hanao fanaraha-maso ny hery rehefa mifantoka amin'ny raharaha lehibe hafa koa.
Tsy tahaka antsika olombelona, ​​ny FXShooter Forex Robot dia Mila asehontsika amin'ny korontana ara-pihetsehampo, ary ho afa-miasa ao amin'ny tanteraka calculative tontolo iainana. Ny manam-pahaizana dia tsy mpanolotsaina ho maimaika fotsiny-ny-ny-fotoana fanapahan-kevitra; Raha ny marina no handeha manangona ny zava-misy sy ny tarehimarika, ary tsy hamela ny tahotra, tahotra sy ny adin-tsaina mahazo an-dalana.
FXShooter EA - Momba ny lozika ara-barotra, fananganana sy takiana hafa
FXShooter EA dia tombony azo antoka sy azo itokisana amin'ny scalper EA misy tombo tokana izay afaka manaraka ny fironana amin'ny tsena.
Ny FX Robot dia miasa EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD ary USDCHF tsiroaroa amin'ny fotoana iray. Takeprofit isaky ny baiko dia tokana, ilay Mpanolotsaina manam-pahaizana dia manitsy azy io amin'ny toe-java-misy ankehitriny eo amin'ny tsenan'ny FX.
FXShooter EA dia mifanentana amin'ny mpiasan'ny Metatrader 4 (MT4), ary koa amin'ireo mpivarotra mampiasa ny ECN-type order. Ity Forex Expert Advisor ity dia mitaky fandanjalanjana tsy latsaky ny 1,000 USD amin'ny fampiasana be 0.1.
Politika refunda: Ny mpivarotra dia manome antoka 30 andro famerenam-bola. Ho afaka hahazo famerenam-bola ianao raha toa ka mampiasa toe-javatra ilaina ianao mandritra ny vanim-potoana voalohany 30 tsy misy manelingelina ny asan'ny EA ary mahazo fisintonana mihoatra ny 40%. Ny fihary kely kokoa dia mety hitranga, ara-dalàna ny paikady, ary ho voasarona haingana izy ireo. Raha tanteraka ny toe-javatra rehetra, ny mpivarotra dia hanome anao famerenam-bola feno sy feno FXShooter hijanona aminao ho valin-karama.
Manoro hevitra mafy izahay hampiasa kaonty demo talohan'ny fifanakalozana amin'ny vola tena izy. Hanampy anao hahalala bebe kokoa ny fomba fiasan'ny FXShooter alohan'ny hanaovanao vola tena izy amin'ny kaonty vola tena izy.
FXShooter EA dia azo jerena ao amin'ny mampino hatrany vidiny, izany hoe $ 299 ihany. Aza miandry mba haka ny dika mitovy!
Tsidiho ny tranokala FXShooter EA ofisialy
Hanomboka date: Enga anie 2, 2019
Live broker: PaxForex
Hanomboka date: Aogositra 21, 2019
Forex varotra rindrambaiko
Famerenana Robot FXShooter Forex Robot
10 volana lasa izay
FXSHOOTER EA - TOROHEVITRA FAMPISORANA FAMPISEHOANA AN-TOKONY MBOLA ATAO: FIVAROTANA 23.7% (ATSIKA TSY MISY TOKONY VOLANA!) Ry mpiara-miombon'antoka Forex, vaovao! FXShooter EA Review - Mpanolotsaina Mpanampy Forex mahasoa amin'ny famoahana ny scalping Mahazoa fampahalalana sy bonus bebe kokoa eto: https://www.bestforexeas.com/fxshooter-ea-review/ FXShooter EA dia mpanolo-tsaina Forex sy mpanolo-tsaina feno tombony. tombony azo antoka. Efa niasa nandritra ny taona maro ny mpanakatr'ity Forex Robot ity, mba hahafahany mamorona ity algorithm algorithm ity. Ity Expert Advisor ist ity dia iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra ara-barotra forex vita amin'ny tsena ary natao hanaterana fiverenana avo. Na izany aza, miaraka amin'ny fiverenana avo dia tonga amin'ny risika lehibe... Hamaky bebe kokoa "